मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2019-04 > राम्रो विकल्प
त्यहाँ हितोपदेश कुखुरा छ कि मानिन्छ क्रप टाउको वरिपरि रन। यस अभिव्यक्तिको अर्थ जब कोही यति व्यस्त हुन्छ कि ऊ अनियन्त्रित र टाउकोबिना जीवनको माध्यमबाट दौडन्छ र पूरै विचलित हुन्छ। हामी यसलाई हाम्रो व्यस्त जीवनसँग सम्बन्धित गर्न सक्छौं। "तपाइँ कस्तो हुनुहुन्छ?" को मानक उत्तर। हो: "राम्रो छ, तर म तुरून्त जानु पर्छ!" वा "राम्रो, तर मसँग समय छैन!" हामी मध्ये धेरैले एक कार्यबाट अर्कोमा काम गरिरहेको देखिन्छौं जहाँ हामीसँग आराम र आराम गर्ने समय छैन।
मलाई मनपर्दछ कि कसरी येशू हतारिएर, विचलित भएको र चिन्तित मार्थालाई फर्काउनुभयो। हामीलाई थाहा छैन मार्थाले राम्ररी खाना पकाउँछिन् वा यदि यो खाना पकाउनको लागि तयार पारिएको हो र त्यसले अन्य धेरै चीजहरू सम्बन्धित छ कि। हामीलाई के थाहा छ उनीहरूको व्यस्तताले तिनीहरूलाई येशूसँग समय बिताउनबाट रोकेको थियो।
कहिलेकाँही हामी सबैले फेरि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। मार्थाले जस्तै हामी पनि येशूको लागि राम्रा कामहरू गर्न व्यस्त र अलमल्ल हुन सक्छौं जुन उहाँको उपस्थितिबाट रमाउनलाई हामी बेवास्ता गर्छौं। येशूसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। जब येशूले उनलाई यसो भन्नुभयो: "यो मरियमले उत्तम छनौट गर्यो" भन्ने यो बिन्दु थियो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, मरियमले येशूसँगको सम्बन्धलाई आफ्ना कर्तव्यहरूभन्दा माथि राखे र यो सम्बन्ध त्यो हो जुन हटाउन सकिन्न। त्यहाँ सँधै कार्यहरू हुन्छन् जुन गर्न आवश्यक छ। तर कति पटक हामी आफूले सोचेको कुरालाई जोड दिन्छौं हामीले उनीहरूको लागि गरिरहेको व्यक्तिको मूल्य हेर्नुको सट्टा? भगवानले तपाईलाई उहाँ र उनका सबै सँगी मानवहरूसँग घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्धको लागि सिर्जना गर्नुभयो। मारियाले त्यो बुझ्यो। म आशा गर्दछु तपाईंले पनि गर्नुहुनेछ।